Ciidamada DFKM iyo kuwa AMISOM oo howlgalo ka sameeyey Degmada Balcad.
Balcad:-Ciidamada DFKM ayaa maanta howlgalo ka sameeyey Degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha dhexe, halkaas oo ay haatan gacanta ku hayaan ciidamada DFKM iyo kuwa AMISOM .
Howlgalada ay sameeyeen ciidamada DFKM ayaa waxaa ay sheegeen in ciidamada ay ku soo qabteen dad looga shakisan yahay in ay ka mid yihiin Al-shabaab ,hub iyo walxaha qarxa ;ciidamada DFKM oo kaashanaya kuwa AMISOM ayaa baaritaan ka sameeyey dhamaan xaafadaha ay ka kooban tahay Degmada Balcad.
Agaasimaha hay’adda nabad-sugidda DFKM Axmed Macallin Fiqi oo la hadlay saxaafada ayaa sheegay in howlgalka lagu soo qabtay shakhsiyaad ka tirsan Al-Shabaab wuxuuna sheegay in ay howgalada sii socon doonaan.
Guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Cabdi Jiinow ayaa waxaa uu sheegay in howlgalada ay sameeyeen ciidamada DFKM ay ku soo qabteen in ka badan 20 qof kuwaas oo lagu xiray saldhiga Degmada Balcad.
Howlgalada ay ka sameeyeen ciidamada DFKM magaalada Muqdisho,Afgooye iyo Degmada Balcad ayaa waxaa lagu soo qabtay dad aad u tiro badan kuwaas oo u badan dad rayid ah waxayna ay la kulmaan dhibaatooyin kala duwan sida in laga qaato lacag faro badan oo madax furasho ah.
240,327 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress